Fialantsasatra 5 amin'ny fararano: inona no andrasanao hamonosana ny valizinao? | Bezzia
Fialantsasatra 5 amin'ny fararano: inona no andrasanao hamonosana ny valizinao?
Maria vazquez | | Tsangatsangana
Nandao ny fahavaratra isika fa tsy te handositra ary mahita toerana vaovao. Roa, telo na efatra andro dia ampy hankafizanao ireo fitsangatsanganana arosonay anio ary hitondra anao any amin'ny toerana mahafinaritra indrindra amin'ity vanim-potoana ity.
Ny fararano dia mandoto ny tontolo ny lokony mena, ocher ary volontsôkôlà, mahatonga ny valan-javaboahary antsika hitafy ravina vaovao. Saingy afaka miampita sisintany ihany koa isika ary tsy mandany fotoana be loatra amin'ny sidina, mitsidika tanàna kely sy milamina izay ahatsapantsika ny trano. Te hahafantatra izay fitsangatsanganana fararano dimy efa nomaninay ho anao izahay?
1 Lohasahan'i Baztan
5 Faritanin'ny Farihy
Ny trilogy Baztan Valley dia nampiroborobo ny fahalianana amin'ity faritra Navarra ity ahafahanao miaina fitoniana sy hafaliana voajanahary. Faritra anjakan'ny ala mikitroka izay miova isaky ny vanim-potoana ahafahanao mahita lapa maro sy trano fambolena vato mavokely misy lavarangana lehibe koa; monasiteran'ny medieval sy tetezana ambonin'ny renirano mitsambikina; tanjona miparitaka manerana ny kijana sy ny havoana ...
Tanàna dimy ambin'ny folo no mandrafitra ity faritra tonga lafatra ity ho an'ny iray amin'ireo fitsangatsangananao amin'ny fararano: Oronoz-Mugaire, Arraioz, Irurita, Almandoz, Berroeta, Aniz, Ziga, Lekaroz, Gartzain, Elbetea, Arizkun, Azpilkueta, Erratzu, Amaiur-Maya ary Elizondo, ny lehibe tanàna avy amin'ny lohasaha. Ny kirihitra dia nisondrotra teo anelanelan'ny taonjato fahafito ambin'ny folo sy fahasivy ambin'ny folo niaraka tamin'ny Vola karana ary avy amin'ny mpifanolo-bodirindrina izay niasa tao amin'ny tribonaly espaniola.
Ao amin'izy ireo no ahitanao trano fiompiana niova ho trano ambanivohitra mahafinaritraizay ahafahanao mankafy ny fomba amam-panao sy ny toetran'ny olona Baztan. Azonao atao koa ny mampiasa azy ireo ho toy ny fototra hanatanterahana ny sasany amin'ireo làlana malaza na hetsika malaza toy ny:
Fitsidihana ny lalan'ny mpanondrana olona an-tsokosoko izay mampifandray ireo lava-bato akaiky any Urdax, Zugarramurdi ary Sara
Raiso ny fomba fijery mahatalanjona avy ao amin'ny fomba fijerin'i Ziga.
Tsidiho ny gara Izpegi dolmens na ny megaliths an'ny Erratzu-Alduides.
Mandehana amin'ny lalana Abartan, dia 12,60 km. vavolom-belona momba ny kolontsaina pastera taloha izay manomboka amin'ny Ziga.
Mandehana ny dia mahafinaritra an'ny Riandrano Xorroxin. Làlana izay mankany amin'ny riandrano manaitra, amin'ny toerana misy zava-maniry maniry.
Ny faritr'i Sierra del Segura dia manafina ireo tandavan-tendrombohitra voasaraky ny lohasaha tery sy hantsana lalina voasokitra amoron'ny renirano sy renirano. Sehatra manana tombontsoa avy amin'ny fomba fijery ekolojika sy tontolo iainana izay mipaka hatrany atsimo andrefan'ny faritanin'i Albacete.
ny villa mahafinaritra izay mandrafitra azy, ny hakanton'ireo velaran-tany ampitan'ny renirano Madera sy ireo faritra voajanahary fiarovana manokana izay misy ny jeografia mikitoantoana mahatonga azy io ho iray amin'ireo faritra mahaliana indrindra amin'ny faritany manontolo ary ny tsara indrindra hitsidihana amin'ny fararano.
Anisan'ireo toerana fizahan-tany am-polony maro, eny, tsy maintsy misafidy izay manintona anao indrindra ianao, toy ny:
To visit faritra voajanahary fiarovana manokana toy ny Chorros del Río Mundo sy ny Cabaña de los Mojones.
Jereo ao Riópar ny fahagagana loharanon'ny renirano Mundo.
Raiso ny fomba fijery avy ao amin'ny Fomba fijery Liétor ary Letur.
Ankafizo ny tanàna mahafinaritra an'i Ayna.
Ankafizo ao Bogarra sy Paterna ny hakanton'ilay tontolo ampitan'ny Renirano hazo.
Any Espana dia misy toerana maro hankafizana ireo lalotra miloko izay mandoko ny fararano any anaty ala, toy ny ala Tejera Negra beech, ao amin'ny Faritanin'i Guadalajara. Ny paleta miloko, ny lumotra manarona ny tany ary ny fahanginan'ny ony dia mamorona atmosfera toa nofinofy.
Tafiditra ao amin'ny Valan-javaboahary voajanahary ao amin'ny Sierra Norte de Guadalajara, ao anaty ala koa dia maniry beech, hazo terebinta Pyrenean, hazo kesika Skot, yew, holly ary birch. Làlana boribory roa Avelany hizaha azy io amin'ny tongotra ianao: ny "Senda de Carretas" (6km.) Ary ny "Senda del Robledal" (20 km). Ho fanampin'izany, misy ihany koa ny zotra boribory marindrano ho an'ny bisikileta izay mahatratra ny reniranon'i Zarzas.
Azonao atao ny misafidy ny ho tonga amin'ny fiara amin'ny toerana hanombohan'ny làlana. Azonao atao ny mamela ny fiaranao any amin'ny zotram-piaramanidina anaty trano (8km miala ny Interpretation Center) izay tratra amin'ny alàlan'ny lalan'ny ala. Amin'ny fararano anefa dia feno ity fiantsonan'ny fiara ity ka ilaina ny mitahiry mialoha. Porofo fa io no iray amin'ireo fialamboly malaza indrindra.
Prague dia renivohitry ny Repoblika Tseky ary an'ny faritra Bohemian manonofinofy. Tanàna tia mandeha miadana ary isaky ny zoro dia misy zavatra holazaina anao. Ny fahaverezana eny an-dalambe am-piandohan'ny fararano dia fanandramana tokoa rehefa mitafy ny tanàna amin'ny tsy fahitan-tory sasany.
Roa na telo andro dia ampy hahitanao ireo arabe rarivato Ilay tanàna taloha, mankafy ny fiadanan'ny tanànan'ny jiosy taloha sy ny fahalehibiazan'i Hradcany, distrika ambonin'i Prague, miditra amin'ny iray amin'ireo tranomboky tsara indrindra eto an-tany, mandiniha ny fomba fijery avy any an-tampon'ny Trano Mandihy na manandrana ny divay voadoka hahatsapa ho iray Bebe kokoa.
Ny Fanjakana Mitambatra dia firenena manana harem-pizahantany sy zaridaina voajanahary tsy hita isa feno zaridaina mahafinaritra sy maitso toa ny Distrikan'ny farihy. Io no valan-javaboary natiora lehibe indrindra any UK; farihy valopolo eo ho eo no manome fahafaham-po ny manodidina an'io valan-javaboary io any avaratra andrefan'i Angletera ary nanambara Lova manerantany.
Ny fahafaha-manao ao amin'ity valan-javaboary voajanahary ity dia tsy misy farany. Azonao atao ny manao lalana samihafa amin'ny alàlan'ny tendrombohitra, mandehandeha ny làlana mampitohy ireo farihy, tsidiho ny iray amin'ireo tanàna tsara tarehy any an-toerana, manaova hetsika rano ... Afaka telo na efatra andro dia tsy ho vitanao ny mahita ny zava-drehetra ka tsy maintsy alaminao tsara ny fitsangatsangananao ary safidio izay mety indrindra aminao. manaraka fitsidihana:
Mitsangàna amin'ny lalana mankany Orrest Head raha hijery fomba mahavariana ny Lake Windermere.
Mampihatra karazana Sport fanatanjahan-tena Sambo, lakana ary lakana amin'ny kay Lake Windermere na Derwent Water.
Tsidiho ny Ambleside, tanànan'ny rarivato mahafinaritra izay feno trano vato mahazatra ao amin'io faritra io.
Jereo Stockghyll Force, riandrano eo afovoan'ny ala mahagaga.
Misaintsaina ny manodidina ny faribolana vato avy amin'i Castlerigg.
Ho entin'ny rivotry ny nofinofy ianao Farihy Buttermere ary ny tanàna bohemia mitovy anarana aminy.
Efa nitsidika ny toerana sasany hatolotray anao ve izahay amin'ireo fitsangatsangananay amin'ny fararano?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Lifestyle » Tsangatsangana » Fialantsasatra 5 amin'ny fararano: inona no andrasanao hamonosana ny valizinao?
Dingana hianarana misaintsaina
Vegetarianisma ary boky telo hahafantarana azy